Xinhua Myanmar - ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသမ္မတ နှင့် ဇနီး တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသမ္မတ နှင့် ဇနီး တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
တရုတ် ပါကစ္စတန် သမ္မတ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့၌ မတ် ၁၅ ရက်တွင် သမ္မတ Arif Alvi က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ မတ် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသမ္မတ Arif Alvi နှင့် ဇနီး Samina Alvi တို့သည် မြို့တော်အစ္စလာမ်မာဘတ်တွင် မတ် ၁၅ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြောင်း သမ္မတရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
သမ္မတဇနီးမောင်နှံသည် ပြီးခဲ့သောလက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအမည်စာရင်းသွင်းဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းလိုင်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုစင်တာတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက် ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့၌ မတ် ၁၅ ရက်တွင် သမ္မတ Arif Alvi က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သမ္မတသည် Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကာကွယ်ဆေးဟာ ရောဂါကူးစက်မှု မခံရအောင် ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကပ်ရောဂါကနေ တစ်ကမ္ဘာလုံး အပြည့်အဝ ပြန်မလွတ်မြောက်ခင်အချိန်ထိတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်တာ ၊ လက်ဆေးတာ ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးခပ်ခွာခွာနေတာမျိုးကိုတော့ ဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ” ဟု ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူပြီးနောက် ပါကစ္စတန်သမ္မတက သတင်းထောက်များအားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ၎င်းက ပြည်သူများအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါတတိယလှိုင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများ လုပ်ဆောင်ကြရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ “ ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ( နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်း လက်ဆေးခြင်း ခပ်ခွာခွာနေခြင်း ) တွေ လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ထပ်ရောဂါမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပေးဖို့အတွက် ဆိုလိုတာပါ ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သမ္မတ Alvi က လူသေဆုံးမှုဖြစ်နိုင်သည့် ကိုဗစ်ရောဂါသည် သက်ကြီးပိုင်းများတွင် အခြားသူများထက် ပို၍ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတစ်ခုတည်းကသာ ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်သူများ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရအနေဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီသောယန္တရားတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို တရုတ်အစိုးရ နှင့် စစ်တပ်ထံမှ ပြီးခဲ့သော လတွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက် ရှေ့တန်း၌ လုပ်ကိုင်နေကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအစီအစဉ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အသက် ၆၀နှစ်အထက် သက်ကြီးများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းအစီအစဉ်ကို ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ISLAMABAD, March 16 (Xinhua) -- Pakistani President Arif Alvi and his wife Samina Alvi on Monday received their COVID-19 jabs with the Sinopharm vaccine in Islamabad, according toastatement from the president's office.
Pakistani President Arif Alvi receivesashot of COVID-19 vaccine in Islamabad, capital of Pakistan, March 15, 2021. (Press Information Department of Pakistan/Handout via Xinhua)
Previous Article Moderna က အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုစတင်
Next Article အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းများ စတင်